Haween loo furay tababar la xiriira ka ganacsiga Kalluunka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta in ka badan 20, haween ah u furay tababar la xiriira shaqada Kalluumeysiga, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho.
Siminaarkan oo socon doono muddo sideed cisho ah waxaa kaloo ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, xubno ka socday hay’adda cunada iyo beeraha ee FAO, waxaana inta uu socda lagu baran doonaa qalajinta kalluunka, iyadoo ay iska kaashanayaan Hay’adda FAO, Wasaaradda kalluumeysiga iyo Jaamacadda Daarul-xikma ee magaalada Muqdisho.
Dr Xasan Maxamuud Meyre oo ah hormuudka Kuliyadda culuumta badaha ee Jaamacadda Daarul-Xikma ayaa sheegay in haweenka ka qeyb galaya siminaarka ay ka faa’iideysan doonaan, oo ay ka baran doonaan habka loo qalajiyo kalluunka oo ay iska dhaafaan inay cusbo ku qalajiyaan.
Yuusuf Axmed Hiraabe Guddoomiyaha Jaamacadda Daarul-xikma ayaa hoosta ka xariiqay in siminaarada nuucaani oo kale ah ay ugu talagaleen in haweenku ay ka faa’iideystaan oo ay wax ka bartaan habka ay u qalajinayaan kalluunka ay ka ganacsanayaan.
Xiriiriyaha Soomaaliya ee Hay’adda FAO Dr Xuseen Cali Axmed ayaa sheegay in bulshada looga fadhiyo inay ku baraarugaan sidii ay uga faa’iideysan lahaayeen kheyraadka dalka, isla markaana uu dhiiri gelinayo in la joogteeyo siminaarada nuucaan oo kale ah.
Xildhibaan Prof Maxamed Cumar Dalxa ayaa xusay inay lagama maarmaantahay in haweenka lagu dhiirigeliyo shaqada ay hayaan, isla markaana la siiyo fursado aqoontooda kor loogu qaadayo, si loo horumariyo wax soo saarka dalka.
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Mudane Maxamed Cumar Ceeymooy ayaa sheegay in Wasaaraddu ay xoogga saareyso ka faa’iideysiga kheyraadka dalka, taasi oo lagu gaari karo isku filnaansho dhab ah.
“Gabdhahan aan u tababareyno waxaan kula dar daarmayaa inay ka faa’iideystaan siminaarka, waxaana qorsheyneynaa in aan xoogga saarno sidii loo heli lahaa meelo lagu qaboojiyo kalluunka badda laga soo saaro iyo in aan xoojino tababarada nuucaani oo kale ah” ayuu yiri Wasiirka Kalluumeysiga.